အမှတ်တရလေးများ: မမူမူအောင် ( ဒူဘိုင်း)၏ မွေးနေ့အလှူ။(၂၁.၉.၂၀၁၁ )
မမူမူအောင် ( ဒူဘိုင်း)၏ မွေးနေ့အလှူ။(၂၁.၉.၂၀၁၁ )
၁၃၇၃ ခု တော်သလင်းလပြည့်ကျော် (၉)ရက် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် မမူမူအောင် (ဒူဘိုင်း)၏ မွေးနေ့အလှူ အဖြစ် သံဃာတော်များကို အရုဏ်ဆွမ်းအတွက် ကြက်သားကြာဇံချက်ဆွမ်းကပ်လှူခဲ့ပါတယ်။အလှူရှင်မမူမူအေင်မွေးနေ့မှစ၍စိတ်ချမ်းသာကိုယ်ကျန်းမာစွာဖြင့်အစစအရာရာအဆင်ပြေအောင်မြင်ပြည့်စုံ၍သာသနာအကျိုး၊လောကကောင်းကျိုးများသယ်ပိုးဆောင်ရွက်နိုင်ပါစေလို့ဆွမ်းလောင်းအသင်းမှသံဃာတော်များကိုယ်စား ၊ဦးဇင်းမှဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်။မွေးနေ့အလှူဓါတ်ပုံများကို စစ်ကိုင်းတောင်ရိုး ဆွမ်းလောင်းအသင်းဘလော့ဂ် တွင် တင်ထားပါသည်။စစ်ကိုင်းတောင်ရိုး ဆွမ်းလောင်းအသင်း'
photo credit to : Google မတွေ့ရက်တွေကြာခဲ့လေပြီ။ ၁ရက်မှ.၂ရက်. ၂ရက်မှ..၃ရက်။ ခုတော့ ၂ပတ်တိုင်ခဲ့ပြီပေါ့။ သူတို့တွေ နေလို့မှ ကောင်းကြရဲ့လား။ စီးကရက်တွေ...
*ကန္တာရ ပန်းပွင့် * (၁)။
ယက်လုပ်ပြီးခါစ ပိုးကတ္တီပါ အနက်စလို ချောမွတ်နက်ပြောင်နေတဲ့ အရေပြားတွေအောက်ကနေ ကမ္ဘာကြီးကို ချောင်းမျောင်းကြည့်လိုက်တယ်။ ဝါရစ်(စ...
တိမ်လွှမ်းနေတဲ့ တောင်တန်းလေးများ မျက်စေ့ တဆုံးတလျား တွန့်ခေါက် ကြေကွဲ နာ...
ရနံ့ တွေရတဲ့ တောတစ်အုပ်မှာ
ငါက " ကေသရာဇာ " ဖြစ်ချင်တာ
ဒါပေမဲ့ . . . ဘယ်လေညှုင်းနုနုမှဖမ်းစားဖို့ 
စိတ်ကူးမရှိဘူး . . . . .
ကျွန်တော်တို့ဟာ ဘ၀ကို ပေါ့ပေါ့တန်တန် သဘောထားတတ်ကြတယ်။ အထူးသဖြင...
ညီလင်းဆက်၊ ရီတာ၊ ကိုပေါတို့ ရေးထားတာတွေနဲ့ ပြောင်းပြန်ဆန် ရေးရမှာ ခပ်လန့်လန့်ရယ်။ ဒါပေမယ့် သမိုင်းပေး တာဝန် ရှိလာတော့ (ဘယ်သူမှလည်း ပေးထားတာ မဟုတ်ဘဲနဲ့) ရေး...
Number of View:2ကစ်တုန်က ငါးတန်းတက်နေတဲ့ ကျောင်းသားလေးတစ်ယောက်ပါ။ ကစ်တုန်ရဲ့ ကျောင်းနာမည် က ဝေဟင်ထွဋ်ခေါင် ဖြစ်ပေမဲ့ မွေးကာစက အသားဖြူဖြူ ပါးဖောင်းဖောင်းက...
လက်သမားဆရာကြီး ဦးဖိုး ရုတ်တရက် ကွယ်လွန်တော့ သူ့မိန်းမ ဒေါ်စော ငိုချင်းချပုံလေးက ကျုပ်တို့ရွာမှာ ငိုအားထက် ရယ်အားသန်ပြီး ပြောစမှတ်ဖြစ်စရာ။ အသုဘ...
(ပုံကို www.google.com မှ ရရှိသည်) နွေးထွေးခြင်းနှင့် လက်တစ်စုံ ကမ်းခဲ့ဖူးသလို
လက်ပြနှုတ်ဆက် ကျန်ခဲ့တာလည်း ဒီနေရာ။
ပျားရည်ဆမ်းတဲ့ ရယ်သံချိုချို ဟစ်ကြွေ...
ဂျပန်အမျိုးသမီးကို သတ်သည်ဟု စွပ်စွဲခံရသူအား ရုံးတင...
ကိုကျော်သူရ (စင်္ကာပူ)၏ မွေးနေ့အလှူ (၂၉.၉.၂၀၁၁)ကြာသပ...
ကျွန်မ အမြဲရွတ်ပွားဖြစ်သော ဂုဏ်တော်ကွန်ခြာ
မေတ္တာသုတ် ၊ ပရိတ်ကြီး ၁၁ သုတ်
Shopping in Myanmar.
ဒယ်အိုးဆရာတော် ဥုးသုမင်္ဂလ၏ Singapore တရားပွဲ - 1Oct...
သာသနာတည်ဘို့ ဆွမ်းလောင်းစို့.. နေ့စဉ်အချိန်မှန် လေ...
ကိုသက်မြင့်ဦး+မကေသီလွင်၊သမီး လွင်မာမင်း(စင်္ကာပူ) န...
မဇီးသီး ယူမလား၊ မတူး ယူမလား ??
တာဝန်ကိုယ်စီ ယူကြဘို့တော့ လိုမယ်ထင်ပါသည်။
I Believe 絢香
မခင်ငြိမ်းချမ်းဦး (မလေးရှား) ၊မယဉ်ယဉ်ပြုံး(စင်္ကာပူ...
Lady First Latest Fashion Show 2011
ဗုဒ္ဓဂယာ ဥရုဝေလ တရားစခန်း အလှူရှင်များစာရင်း နဲ့ ဗု...
ဦးဝင်းမြင့်+ဒေါ်မြမြ ၊သမီး မတင်မိုးဟန်၊မသိဂီင်္မြင့်...
စံညိုညိုမြင့် သူနာပြုအကူသင်တန်းကျောင်း (၆)နှစ်ပြည်...
ပြည်ပမှ ကားများ တင်သွင်းခွင့်ပြုတော့မည်။( Weeklyel...
ဗုဒ္ဓဂယာ ၊ဥရုဝေလတရားစခန်း နှင့် အုတ်တံတိုင်းအလှူရှင...
ဒေါသငြိမ်းအောင် သတိဆောင် အစဉ်ငြိမ်းချမ်း၏။
ဦးဥာဏ် နဲ့ ဘေဂျင်းခရီးစဉ်အမှတ်တရ
နုညံ့ချောမွေ့လှပနေသော မျက်နှာပြင်လေးဖြစ်စေဖို့ PUR...
ဦးလှထွန်း မေတ္တာရိပ်မွန် ကင်ဆာဖောင်ဒေးရှင်း (မန္တလေ...
ဗုဒ္ဓဂယာ ၊မဟာဗောဓိဓမ္မရိပ်သာ ၀ါတွင်း ၃ လတရားစခန်း အတ...
မန္တလေးမြို့ ၊မဟာမြတ်မုနိဘုရားကြီး ဘက်စုံမွမ်းမံအလှ...